Chiedza chinodzora: gadzira chako kutonga mwenje wako | Mahara emahara
Parizvino pane kuwanda kwema smart bulbs anogona kudzorwa kubva kune nharembozha kana kuburikidza nevamwe vechokwadi vabatsiri kuburikidza nezwi rairo. Imba ye Smart, kana imba yakangwara, iri mufashoni, uye kana iwe uchida kutanga kudzidza mashandiro aya, unogona kuzviitira wega kudzima kumba
Nayo unogona kudzora kusimba yerambi kana girobhu kuti ugadzire mamiriro aunoda. Kuwedzera kusimba kwekuti iwe paunoverenga, kudzidza, nezvimwewo, uye zvishoma kugadzira mhepo inogamuchirwa kana iwe uchida kuzorora ...
1 Chii chinonzi dimmer kana dimmer?
1.2 Zvivako Zvokuvaka
2 Kutevedzera naArduino
Chii chinonzi dimmer kana dimmer?
Un kudzima, kana kupenya kwakasimba, chishandiso chinokwanisa kudzora magetsi zvichibva pamagetsi emagetsi kana matatu. Izvi zvinogadzirisa magetsi anosvika girobhu racho uye simba rawo richachinja zvichienderana nemagetsi emagetsi. Semuenzaniso, mune ino kesi ini ndicharatidza mutongi kuti ini ndaifanirwa kuunganidza nguva refu yapfuura kuitira chirongwa mune yemagetsi kosi.
Zviri nyore, zvakachipa, uye zvinogona kushandiswa nazvo chero girobhu rinowirirana. Kuti ugadzire iyo, heino mirairo ...
Izvo zvauchazoda zveiyi DIY chirongwa kuve nehunyanzvi hwemugadziri uye zvinhu nyore kuwana senge:
Bifilar mhangura tambo zvemagetsi.
Ziva kubatanidza kune chero chishandiso kupa simba.
Girazi fiyuzi ye5A, inomiririrwa naF muchirongwa. Nesarudzo, unogona kushandisa muridzi wefuse, kuti zvive nyore kushandura fiyuzi, kunyange ichigona kutengeswa zvakananga.
Insulating bhokisi o kuisa. Iwe unogona zvakare 3D kuprinta iyo kana iwe uine printa, kana kuigadzira kunze kwehuni, nezvimwe. Ichashanda sekutsigira uye kuputira dunhu.
Yakadhindwa redunhu bhodhi kuzvinyora neyakafanira dunhu kana bhodhi rechingwa.
Triac BT137 y kupisa sipo kwetatu.
Dhiac BR100 kana zvakaenzana.
2x 39nF / 250v polyester capacitors (C1 uye C4). Uye imwe 2x 22nF / 250v polyester capacitors (C2 neC3).
Linear potentiometer Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. (P1), inoshanda seactuator yekugona kudzora kusimba nemaoko.
Kuramba kwe 12KΩ 0,5w (R1) uye kumwe kuramba kwe 100Ω 0,5w (R2).
Choke coil ine ferrite (L).
Splice tebhu kubatanidza zvinobuda (S) uye kuisa (E).
Tin simbi simbi (kana usiri kuzoshandisa bhodhi rechingwa).
Nezvose izvi, iwe unofanirwa kugadzira zvinotevera magetsi wedunhu:
Kamwe zvese zvakabatana, mhedzisiro chinofanira kunge chiri chinhu chakadai.
Uye kushanda iwe unofanirwa kuwana unotevera mhedzisiro:
Zvino kana uchida chengetedza zvinhu y shandisa arduino kuita dimmer, ipapo iwe unogona zvakare kuzviita zvakapusa. Muchokwadi, ivo vanotengesa LED dimming modules ye AC kusvika 240V seizvi, kuita kuti zvinhu zvive nyore kwauri. Kugadziriswa kwayo kuri nyore ...
Kune mamwe mapurojekiti akareruka ekugadzirisa kusimba kweDC LEDs, kunyange hazvo zvisiri izvo zvatiri kutsvaga pano ...
Para ita dimmer, kana dimmer, naArduino, unogona kuzviita mune dzakawanda nzira. Iwe unogona kunyange kushandisa akawanda ezvinhu kubva pachirongwa chekare kugadzira chirongwa ichi:
Unogona kushandisa module:
Unogona kushandisa iyo WiFi module kugadzira mwenje wakachenjera ...
Sezvauri kuona, iyo mikana ivo zvakanyanya ...
Mamwe mashoko - Yemahara Arduino kosi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Dimmer: gadzira yako kutonga mwenje wako
DS3231: chaiyo nguva wachi uye karenda yeako Arduino